Imidlalo yeBlackBerry App
Imidlalo yemidlalo yeBlackBerry ayinokukwenza ukuba uvelise ngakumbi, kodwa ngokuqinisekileyo inokukunceda uhlale ungenalo uxinzelelo. Eziapps zomdlalo zinika ingqondo yakho ukuphumla okanye ukuzilolonga, kuxhomekeke kwinto oziva ngathi uyayidlala.
Ioyile ye-quadritop yenja
$ 4.99 ngexabiso
Amakhonkco eSikolo, ukusuka Isoftware yekhonkrithi , yi-app yeBlackBerry esusa uxinzelelo lwegalufa: ukugcina amanqaku. Likhadi lekhadi lomntu eliyilwe kakuhle. Ungaseta ikhadi lamanqaku ngaphambi kokuba uye kumdlalo wosuku okanye uwenze ngelixa uqhubeka kancinci kwaye ubuyela ekhosini. Ukufaka amanqaku, khetha Dlala kwimenyu ephambili kwaye ukhethe kwikhosi osele ungene kuyo kwi-app. Okanye unokwenza ikhadi kuloo ndawo-enokuthi okanye ingabacaphukisi abanye abane kwi-foursome yakho nakwabo balinde ukuphuma emva kwakho.
Xa udlala umngxunya ngamnye, ungayeka ukufaka idatha malunga nokuba uqhuba njani, kunye nenani lemivumbo (kunye nezohlwayo). Ungajonga izibalo zawo nawuphi na umdlalo oqhubekayo kwaye uninzi ufuna ukubambelela kwizizukulwana ezizayo. (Eminye onokufuna ukuyicima kwangoko kwaye ungaze uphinde uxoxe ngayo.)
UTycoon weSitimela sikaSid Meier
I-Tycoon yesitimela kwiBlackBerry (enikezelwa yiSoftware yeKhonkrithi) ngokusisiseko ikwayimithambo yengqondo efanayo enika umdla kumdlalo wePC, ngaphandle kokuba icinezelwe kakhulu ukuze ilingane kwiscreen esincinci sefowuni yakho. Ngokucacileyo, kwakufuneka kwenziwe ulungelelwaniso, kodwa umboniso omncinci unalo ithuba lokujonga amehlo kunye nengqondo kulowo msebenzi.
Zicinge njengomnye wabakhi bakaloliwe abakhulu kwiintsuku eziphambi koohola bendlela, imithetho yokhuselo lokusingqongileyo, kwaye akukho nenye into eyenzekayo ngendlela yommiselo. Yayilixesha lobungxowankulu obumsulwa: ngaba ungakha umzila kaloliwe ovela kwimveliso okanye abakhweli kwaye uyihambise kwimarike okanye kumzi-mveliso okanye kwisixeko sabaphambukeli? Kwaye okona kubaluleke kakhulu, ngaba ungayenza inzuzo?
Uqala ngesuntswana lotyalo-mali kunye nemephu yeendawo ezivulekileyo. Unokwenza uphando ngokubonelela kunye nokufuna kwaye ukhethe indawo zokudibanisa. Emva koko uphanda iindleko ezinxulumene neendlela ezahlukeneyo kwaye, ukuba uyafuna, uboleke imali ngokuthengisa iibhondi. Wakha umkhondo, izitishi, iibhlorho, okanye iitonela ukuba kunyanzelekile. Ulawula iimali zakho, ulungelelanisa ityala kunye nenzuzo enokubakho.
Ekugqibeleni, uyaphumelela ngokuvelisa iphepha lomncono elibonisa inzuzo. Ulahleka ngokwakha umzila kaloliwe ungayi ndawo, okanye umgca obizayo ophulukana nemali.
Ipakethi yeAces Solitaire 2
Ikhonkrithi yeSoftware I-Aces Solitaire Pack 2 ibandakanya iindlela ezingekho ngaphantsi kwezingama-40 zomdlalo kunye neseti epheleleyo yentsimbi kunye nemilozi, kubandakanya iziphumo zesandi, ukulandelela umthetho, kunye nethuba lokuposa amanqaku akho kwi-Intanethi ukuze ubone ukuba ungqinelana njani Indalo-yokuchitha ixesha edlala omnye wemidlalo kuloliwe ongaphantsi, kwesinye sezihlalo ezingahambi ngemoto, okanye kumqolo ongasemva weholo yokufundela ekholejini. Imidlalo ibekwa ngobunzima, kwaye unokukhetha useto ngalunye. Ukuba ufuna iMulligan unokulungisa okanye wenze kwakhona intshukumo.
Ipakethi yeTrafikhi yeAces
I-Aces Traffic (enye insiza evela Isoftware yekhonkrithi ikubonisa iphazili. Imoto yakho ivaliwe liqela labantu abangacingeliyo, abangenazixhobo, nabaqhubi abangakwaziyo - ngamanye amagama, ukuhamba kwakho kwemihla ngemihla. Umsebenzi wakho kukuwufumana kwindawo yokupaka uye ekuphumeni ngokufanelekileyo, uhambisa ezinye iimoto endleleni yokucoca indlela.
I-5mg diazepam yomelele
Iphakheji iza namanqanaba amathandathu obunzima obandayo, nganye ineepuzzle ezimalunga nama-80: ezo zimalunga neendlela ezingama-480 zokukuqhubela.
Ipakethi yesibini elandelayo
Ipakethi ezimbini ezizayo, ukusuka Imobile , ngumdlalo okrelekrele okunceda ukuba uphinde ufumane ubungqongqo bengqondo. Imizuzu embalwa ekhethwe ngononophelo yokuzivocavoca ingqondo isenokuba yeyona ndlela ilungileyo yokutshayela ecaleni kweebhotwe ezithi ngamanye amaxesha zikhule phakathi kweendlebe zakho.
Amanqanaba amabini eepuzzle ezingama-64 inye, ipakethi ezimbini zeepuzzle ezothusayo. Imigaqo ilula kakhulu: Susa zonke iibhloko kwiscreen ngokudibanisa iibhloko ezifanayo ezinombala kumaqela amabini okanye nangaphezulu. Uyakufumana ukuxhoma kwayo ngokukhawuleza, ubuncinci kwiipuzzle zokuqala; ezizayo zinokukuxhuma iiyure.
UNintaii ligama lesiJapan eliguqulela ngokomonde njengomonde. Uya kudinga okukhulu nintaii Ukufumana lo mdlalo ulula ngokukhohlisa ukusuka Imobile , Exuba amasuntswana kunye neziqwenga zokujonga kunye neepuzzle zepokotho. Injongo yomdlalo kukufumana ibhloko ukuba iwele emngxunyeni wokuphuma ekupheleni kwenqanaba ngalinye. Ucofa ibhloko kwaye uyiqengqele phambili okanye ubuyele umva. Ukuza kuthi ga ngoku, kulungile, ngaphandle kokuba ibhloko ibuxande (iiseli ezimbini ububanzi okanye ubude) kwaye umngxunya usisikwere (iseli enye). Kwaye kukho iziphelo ezingasekhoyo kunye neendlela zokuvalwa kwendlela, kwaye kumanqanaba kamva, ukutshintshwa ekufuneka kwenziwe kusebenze ngokuma ibhloko kubo.
IMobigloo ’ I-Pinball Deluxe yinto emangalisayo kwezobuchwephesha- inguqulelo encinci entle yomdlalo wepinball, ogqityiweyo ngemizobo egudileyo kunye neyona eneenkcukacha oza kuyifumana nakweyiphi na into ephathwayo. Uziva ungcangcazela entendeni yesandla sakho ngalo lonke ixesha ibhola ibetha ibumpers.
Push ubambe spacebar ukurhoxisa iplunger, emva koko uyiyeke ihambe. Emva koko bukela ibhola ngelixa lijikeleza iscreen kwaye ulinde elona xesha lililo lokukhulula enye yeentsika. Abaqulunqi bayakuvumela ukuba ucofe naliphi na iqhosha kwicala lasekhohlo kwiflipper yasekhohlo kwaye nakuphi na ekunene kwelinye.
uyisusa njani ibhidi kwi-ebay
zithromax idosi yomqala womqala
ndiyakwazi ukugoba idolo
amayeza kakhulu umqala obuhlungu kunye nokukhohlela
Ungayitshintsha njani imvelaphi yekhompyuter yakho
uziva njani u-seroquel